Expert Semalt Expert Akwadoro na Ị Dị Mkpa Iji Mụta Banyere Online Frauds Ndien Scams - Nke a bụ Ntak
A na-akpọkarị aghụghọ wayo dị ka "aghụghọ aghụghọ" ma ọ bụ "ojoro". Ụdị aghụghọ apụtara n'ọtụtụ ụdị, dị ka spam email. Ugwo maka iji ma ọ bụ na -eme iwu ego nzipu ego bụ iri ruo afọ iri abụọ n'ụlọ mkpọrọke United States. Ndị na-asọ oyi na-emekarị ka hà bụ ndị nnọchianya nke òtù ọrụ ebere ma na-achọ enyemaka maka ndị ahụọdachi ndị na-emere onwe ha, ọgụ ndị na-eyi ọha egwu, ọgba aghara obodo ma ọ bụ ọrịa na-efe efe. Ọ bụrụ na ị na-ese ntanetị ịntanetị, ọ dị mkpa na ị ga-edo onwe gị n'okpuruakụkọ banyere Australia Network Cybercrime Online Reporting Network (ACORN) n'oge ọ bụla o kwere omume. Akụkọ maka netwọk a na-aga n'ihu ndị uweojiima ọ bụ ụlọ ọrụ ọgụgụ isi maka nchọpụta nwere ike ime.
Jason Adler, Njikwa Ihe Nlekọta Ahịa nke Ọkachamara ,na-elekwasị anya ụdị ụdị aghụghọ nke ịntanetị n'ebumnuche iji nyere gị aka chebe onwe gị pụọ na mwakpo ahụ.
Ụdị ụdị aghụghọ ndị na-emekarị na Internet bụ ịghọgbu ego na Ịntanetị, njakịrị, ịzu ohi,na ịzụ ahịa na nkwụsị ahịa site na wayo.
aghụghọ ego na Ịntanetị
A kọwapụtara ya dịka ojiji nke nwere ikike na-akwadoghị iji nweta akụ, nkeonweozi, ihe onwunwe ma ọ bụ ego site na ụlọ ọrụ nzuzo ma ọ bụ onye ọkpụkpọ. Ụdị ọnụọgụ ịntanetị kachasịsịsịsịsịsịsị iche bụ nchịkọta anụ ọhịa naphishing. Ndị na-agba ọsọ na-ejikarị ozi dị nro dị ka paswọọdụ ma ọ bụ aha njirimara iji nweta nkọwa gị. Ha nwere ike inweta ozi dị otú ahụ site nambadamba nkume gị, ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ laptọọpụ site na iziga malware na nje.
N'ụbọchị ndị a, ọtụtụ ndị na-eji fon ha na smartphones iji nweta akụ haakaụntụ. Ndị omempụ maara na ọ nwere ike isiri ha ike ịnweta ozi gị. Ya mere, ha zipụrụ ozi ịntanetị ma ọ bụ jụọ gị ka ị pịa kpọmkwemnjikọ, ikpughe ozi nzuzo. I kwesịghị ịza ozi ịntanetị amaghi. Ọ dịkwa mkpa ka ị ghara pịa njikọ ndị na-amaghịma leghara ndị na-ezigara gị akwụkwọ ozi.
N'aka nke ọzọ, ntinye akwukwo bu ngbali iji nweta ihe ndi nwere nleghari anya dikaaha njirimara, paswọọdụ, nkọwa PayPal ID na kaadị akwụmụgwọ, site na ịtụgharị dịka ndị ọrụ a tụkwasịrị obi na nkwukọrịta kọmputa.
Spam enyemaka nzacha nyere aka belata ọnụ ọgụgụ emelị phishing nke ruru gịigbe mbata. Ịnwekwara ike ịwụnye antivirus ma ọ bụ ngwanrọ malware iji chekwaa ozi gị. AFP na-egosi na ị gaghị azaghachi yaozi ịntanetị na ihichapụ ha ozugbo enwere ike. Ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla agbakwunyere, ịkwesịrị ịmepe mmeghe ahụ ka ha nweremmemme a achọghị ma ọ bụ nje.
Ịzụ ahịa ahịa na ịzụ ahịa
Ndị omekome na-ejikarị nkà na ụzụ ọhụrụ emepụta ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa na-eledị ka ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ịntanetị. Ha na-eji usoro ihe ndị dị egwu na atụmatụ iji dọta ọtụtụ mmadụ. Ọ dị mkpa ka ị gharatinye ozi gbasara gị, nkọwa kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ PayPal ID na weebụsaịtị ndị dị otú ahụ. Niile ntaneti ntanetị nwere iwu na iwu siri ike.Ndị Scammers enweghị ike ịwakpo gị site na ebe nrụọrụ weebụ ndị a, ha makwaara otu esi emeso ndị mmadụ nọ n'èzí ụlọ ahịa. Ị nwere ike ịkpọtụrụ yaKọmitii Ahịa na Ahịa Ahịa Australia iji belata ihe ize ndụ nke ịghọ aghụghọ na weebụ. Mgbe ị na-eji ụlọ ọrụ ntanetị dịka eBay, ha gaagaghị ajụ gị ihe ọ bụla gbasara kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ PayPal.
Ọ bụrụ na ịnweta ozi ịntanetị enyo, ụzọ kachasị mma na kachasị mfe bụ ihichapụha ngwa ngwa o kwere mee. Ọ dịkwa mkpa ka ị ghara ịpịnye Mgbakwụnye zigara na ozi-e Source .